Nwee ọmarịcha mashup a nke sitere na njikọ n'etiti etiti DC na Star Wars | Akụkọ akụrụngwa
Tupu ịmalite ịkpọ vidiyo nke na-ebute isiokwu a, ịkwesịrị ịkwadebe onwe gị maka oge ahụ na nke ahụ bụ na ihe ị ga-ahụ nwere ike ịhapụ gị ogbi na ikwu okwu. Ma ọ bụ na mashup, nke Zack Snyder kere n'onwe ya ị nwere ike ịhụ njikọta n'etiti DC eluigwe na ala na Star Wars, ihe anyị na-atụghị anya ya ugbu a nke nwere ike ọ gaghị eme eme.
N’ụbọchị ole na ole, a ga-ewepụta ya n’ụwa niile "Rogue Otu: A Star Wars Akụkọ" na nke ahụ bụ otu ihe doro anya kpatara vidiyo a, siri ike nghọta, na-ehichapụ netwọk nke netwọkụ.
N'ime ya, dị ka anyị gwaworo gị, anyị nwere ike ịhụ njikọta n'etiti DC Universe na Star Wars, na-enweghị uche dị ukwuu, mana yana nnukwu ọrụ ndozi n'azụ iji mepụta mmetụta na ọnọdụ dị omimi. Ọ na-enyekwa anyị nlele nke ụfọdụ aghụghọ na-atọ ụtọ nke ụfọdụ ndị na-emepụta ihe dị ukwuu ji eme ihe ka anyị wee nwee ike ịhụ ihe ndị ha kere. Ọ bụrụ na anyị hụrụ ụgbọala na-adọkpụ a, anyị niile ga-agbaga na fim ozugbo iji kpori ndụ ihe nkiri zuru ezu.
Ọ bụrụ ugbu a ị hụrụ na ị dịla njikere, kụọ egwuregwu ma nwee ọ thisụ mashup dị egwu nke nwere nnukwu akụkọ sayensị, nke ahụ agaghị eru nnukwu ngebichi, ọ bụ ezie na nchebe zuru oke nwere ihe karịrị ihe na-adọrọ mmasị nwere ike ịpụta n'etiti njikọta nke mbara igwe DC na Star Wars.
Kedu ihe ị chere gbasara njikọta n'etiti DC na Star Wars?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọkụ ndi mmadu nke anyi nọ n’ime ya ma gwa anyi ma you h merr see njikọ a na-aghọ eziokwu na nnukwu ihuenyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nwee ọmarịcha mashup a nke sitere na njikọ dị n'etiti DC na Star Wars
Tacky mba, ndị na-esonụ. A gbanwetụrụ ụgbọala na-adọkpụ na ntakịrị nke Sony Vega na ihe nkiri ọhụrụ.
Google rutere Cuba na ebumnuche ịkwalite ọrụ ya